ထိပ်တန်း5ဥရောပမှာတော့အများစုကတင့်တယ်သစ်တောများ | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ဥရောပခရီးသွား > ထိပ်တန်း5ဥရောပမှာတော့အများစုကတင့်တယ်သစ်တောများ
စာဖတ်ချိန်:5မိနစ်များ(နောက်ဆုံးတွင်နောက်ဆုံးရေးသားချိန်: 12/03/2021)
ကျနော်တို့စာရင်းနေကြတယ်5ဥရောပ၌အလှဆုံးသစ်တောများ ရုံပွဲလမ်းသဘင်ရာသီအားလပ်ရက်များအတွက်အချိန်အတွက်! ခရီးသွားနှစ်သက်သူအများစုအတွက်အားလပ်ရက်အပန်းဖြေခရီးသည်များဖြစ်သည် ကမ်းခြေ. သို့သော်ဥရောပစူးစမ်းဖို့ကမ်းထက်လမ်းကပိုရှိပါတယ်. ကျွန်တော်တို့ဟာဥရောပ၌အလှဆုံးသစ်တောများအချို့ပတ်လည် stomp ယူကို join.
သူတို့ရဲ့အသံကျယ်ကလေးများနှင့် pestering hawkers နှင့်အတူလူစည်ကားကမ်းခြေအကြောင်းကိုမေ့လျော့. တခါတရံသငျသညျအကောင်းတစ်သစ်တောများ၏ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးကိုရိုက်မရနိုငျ. သဘာဝဖြစ်ခြင်းအမှန်တကယ်ကုထုံးဖြစ်ပါတယ်, ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုအကောင်းဆုံးအများဆုံး frondescent ဥရောပအချို့ပတ်လည် leafy ခုန်ယူပါစေ.
ဥရောပမှာတော့အများစုကတင့်တယ်သစ်တောများများ၏စာရင်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ 1st – အဆိုပါဘာသာစကား Bavarian သစ်တော, ဂျာမနီ
အဆိုပါဘာသာစကား Bavarian သစ်တော အမျိုးသားဥယျာဉ် ဂျာမနီရဲ့ပထမဆုံးနှင့်အကြီးဆုံးအမျိုးသားဥယျာဉ်သည်, နှင့်ဥရောပထဲမှာအလှဆုံးသစ်တောများ၏တဦးတည်း. သငျသညျကိုမေးစေခြင်းငှါအဘယ်ကြောင့်? ကျနော်တို့အယူခံင်း၏ရိုးရှင်းသောသေးပေါများသညျတော၌တည်ရှိသည်ထင်. လူအားကျေးဇူးတင်ပါသည်ကောင်းစွာတစ်ဦးတည်းကထွက်ခွာ! အဆိုပါပန်းခြံတစ်ဦးကတိပေးထားတယ် ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ရာရှုခင်း, ညားထိပ် (ဖြစ်ခြင်းအကျော်ကြားဆုံးသူမြား Grosser Falkenstein, Lusen, နှင့် Grosser ရာခေလ), ကျယ်ပြန့်တောင်တက် နှင့်လမ်းကြောင်းစက်ဘီးစီးခြင်း, မှန်ရေကန်များ, အားကစားအခွင့်အလမ်းများ, တစ်ဦးစိတ်ဝင်စားဖွယ် treetop လမ်းလျှောက်, နှင့်ပိုပြီး.
ပန်းခြံအတွင်းရှိနေတုန်းအနေနဲ့စိတ်လှုပ်ရှားစရာနှင့်ထူးခြားသောစွန့်စားမှုအပေါ်မိသားစုကိုယူလိုသော? အဆိုပါ treetop လမ်းလျှောက် (Baumwipfelbad) ဘာသာစကား Bavarian မှာသစ်တောအမျိုးသားဥယျာဉ်တစ်ခုလုံးကိုမိသားစုများအတွက်သဘာဝနှင့်စွန့်စားမှုနှင့်အတူအနီးကပ်ရင်ဆိုင်ကတိပေးထား. မီတာ ၁၃၀၀ ရှည်လျားသောသစ်သားအတားအဆီးမရှိလမ်းလျှောက်မှုသည် visitors ည့်သည်များကိုအမိုးခုံးပုံလေ့လာရေးမျှော်စင်၏အောက်ခြေသို့ ဦး တည်စေသည်, လမ်းမှာသစ်တော၏စိတ်ကူးအမြင်များကိုပူဇော်သက္ကာဘို့. သင်တို့သည်လည်းလမ်းကြောင်း en စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်လှုပ်ရှားမှုများတွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန်ရှေးခယျြနိုငျ. သို့သျောလညျး, အကောင်းဆုံးကိုနောက်ဆုံးအဘို့ကယ်တင်ခြင်း. ၄၄ မီတာမြင့်သောလေ့လာရေးကုန်းပတ်မှဖြစ်သည်, သငျသညျတောမပြတ်မတောက်အမြင်များနှင့်ပင်ဆီးနှင်း-ဝတ်အဲလ်ပ်တောင်တန်းပေါ်တွင်သင်၏မျက်စိစားသောက်ရ.
Ulm Fussen မှရထား
မြူးနစ် Fussen မှရထား
Nuremberg Fussen မှရထား
Trillemarka Rollagsfjell သစ်တော, နော်ဝေ
ရိုင်းတောအရပ်မှလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည်! Trillemarka Rollagsfjell သဘာဝတရားကြီးကိုထိန်းသိမ်းရေးလူမြိုးအတွက်နောက်ဆုံးကညာသစ်တောဧရိယာများထဲကတစ်ခုဖြစ်ပါသည်. ဒါဟာသင့်ရဲ့သွားလာရင်း-ဟောင်းများကိုသစ်တောတိုးတက်မှုနှုန်းအကြားတောင်တက်များအတွက်နေရာဖြစ်ပါသည်, နဂိုအတိုင်းတောင်ရိုးပေါ်မှာနှင်းလျှောစီးပြီး, နှင့် ငါးဖမ်း အမှန်တကယ်ပါ, r အတွက်ivers နှင့်ရေကန်များ. တစ်ဦးကြွယ်ဝသောစည်းစိမ်လည်းရှိပါတယ်, 93 စုစုပေါင်း, အနီရောင်စာရင်းပေါက်မျိုးစိတ်. သငျသညျမက်ဒေါနားလို့ခေါ်တဲ့ရုပ်တုနှင့်ကလေးခွသေချာအောင်လုပ်ပါ, တည်ရှိသည် 100 ပန်းခြံအပြင်ဘက်မီတာ, ချိုင့်မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်အမြင်များနှင့်ကျော်လွန်. အလွှာအများကြီးယူခဲ့, ရာသီဥတုအကြီးအကျယ်ဧရိယာတစ်လျှောက်လုံးပြောင်းလဲအဖြစ်.
Belluno မိုက်, အီတလီ
အဆိုပါ Belluno မိုက်၏အမျိုးသားဥယျာဉ်ဟာ Piave ချိုင့်ဝှမ်းသည်အထိ Cismon ချိုင့်ဝှမ်းကနေချဲ့ထွင်ခြင်းနှင့်ခုနှစ်မှာတည်ထောင်ခဲ့ပြီး 1990 ၏ဤနယ်မြေကိုစောငျ့ရှောကျဖို့ ကြီးမားသည့်သဘာဝတန်ဖိုးကို, အရာထားပြီး၎င်း၏သီးသန့်သစ်ပင်ပန်းမန်များအလှအပနှင့်၎င်း၏ရှားပါးများအတွက်ရာစုနှစ်တစ်လျှောက်လုံးမှတ်ချက်အောင်မြင်ခဲ့ပါသည်. အကျိုးဆက်, အဆိုပါဆုံးဖြတ်ချက်သည်၎င်း၏ကာကွယ်ပေးရန်ခဲ့ 32000 ဟက်တာ ထံမှ stupendous သဘာဝမြင်ကွင်းကျယ်၏ ဆောငျးရာသီအားကစား တိုးတက်ရေး.
အဆိုပါnowရိယာယခုဖြစ်ပါတယ် အမျိုးသားရေးအမွေအနှစ်များ site ကို အေနနေဲ့တန်ဖိုးရှိဘယ်မှာ၏, မှန်ကန်စွာ, သဘာဝစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကို. ဤဥယျာဉ်ကိုကျွန်ုပ်တို့ချစ်သောအရာသည်အရှေ့တောင်ပိုင်းအဲလ်ပ်၏နယ်နိမိတ်များပေါ်တွင်မထိမခိုက်ရ။ မရနိုင်သောနေရာဖြစ်သည်, အရာသမိုင်းမခေတ်ကရေခဲမြစ်၏ဖွဲ့စည်းခြင်းကိုမြင်လျှင် (ပြီးခဲ့သည့်ပျောက်ကွယ်ကျော် 10000 လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာ!).
ကွာခြားချက်များအဆိုပါ Tre Cime di Lavaredo နှင့်အကြားတည်ရှိနေ Belluno မိုက်, အဆိုပါ rockface ၏အရောင်မှမရှိစေရန်အဆိုပါဖျော့တောင်များအဖြစ်လူသိများ. invigorating plateaux နှင့် vertiginous rockfaces: ဤအရွှေရွှေလင်းတ၏ခြောက်ခြားဖွယ်ရှိပါတယ်, ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့ကျေးဇူးတရားနီးပါးဒဏ္ဍာရီသတ္တဝါများ, သူတို့သည်မြင့်မြတ်။ ခမ်းနားထည်ဝါစွာဖြင့်မိုးကောင်းကင်များနှင့်၎င်းတို့၏မျိုးစိတ်ရှားပါးခြင်းများကိုဖြတ်သန်းကြသည်.
ကျနော်တို့သငျသညျလညျပတျ Belluno မိုက်ဖို့လုံလောက်တဲ့အကြောင်းပြချက်ပေးပြီးကျနော်တို့ကဥရောပထဲမှာအလှဆုံးသစ်တောများများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်ထင်အဘယ်ကြောင့်မျှော်လင့်ပါတယ်.
အဆိုပါအံ့မခန်း Parc အမျိုးသား des Ecrins Vanoise ပြီးနောက်ဆယ်ပြင်သစ်အမျိုးသားဥယျာဉ်၏တဦးတည်းနှင့်ဒုတိယအကြီးဆုံးဖြစ်ပါသည်. အဆိုပါ 1000 စတုရန်းကီလိုမီတာ protected ဧရိယာ Haute Alpes နှင့် Isere ဌာနများခှလြှကျ, Bourg d'Oisans အကြားဆန့်, Briancon, နှင့် Embrun. ပန်းခြံက၎င်း၏ဝေးလံခေါင်ဖျားတည်နေရာနှင့်သင်တန်းအများအားဖြင့် unspoiled ကျေးဇူးတင်စကားဖြစ်နေဆဲ, ၎င်းသည်ဥရောပရှိအလှဆုံးသစ်တောများစာရင်းတွင်ပါဝင်သည်.
အဆိုပါပန်းခြံရဲ့ jagged တောင်တန်းမြေပြင်အနေအထားဖရိုဖရဲရေခဲမြစ်များနှင့်လျင်မြန်စွာစီးမြစ်များအားဖြင့်သတ်မှတ်ထားသည်, အရာမတ်စောက်ကျဉ်းမြောင်းသောချိုင့်ဖန်တီးခဲ့ကြ. နွေရာသီမှာ, တောင်တက်, ရော့ခ်တောင်တက်သမား, တောင်ကြီးသမား, နှင့်အံ့သြဖွယ်ရာသီဥတုနှင့်မေးရိုးကျဆင်းနေရှုခင်းခံစားရန်ဥယျာဉ်သို့မြစ်ပြေးသမားများစုရုံးကြသည်. ဆောင်းတွင်းမှာ, စနိုးဖိနပ်စီးခြင်း, နှင်းလျှောစီး Tours နှင့်တောင်တက်တဲမှတဲလူကြိုက်များ. အဆိုပါ နှင်းလျှောစီးအပန်းဖြေစခန်း Alpe d'Huez ရုံပန်းခြံ၏နယ်နိမိတ်ကိုကျော်လွန်ထိုင်. ဘယ်ဟာဖြစ်ပါသည် 10 ကီလိုမီတာအထိ Bourg d'Oisans ထံမှ switchbacks.
ဥရောပမှာတော့အများစုကတင့်တယ်သစ်တောများများ၏စာရင်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏နောက်ဆုံး – တစ်ဦးကဘောလုံးအားကစားကွင်းများတွင်တစ်ဦးကသစ်တော, နယ်သာလန်
သဘာဝတရား၏ချိုးဆွဲဆောင်မှု Worthersee ကိုပြောင်းလဲသောယာယီအနုပညာတပ်ဆင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည် ဘောလုံးကွင်း. ဒါဟာ Klagenfurt တည်ရှိသည်, ယခုသစ်တောနှင့်အနုပညာတပ်ဆင်ခဖြစ်ပါသည်!
လှည့်ပတ် 300 သစ်ပင်များ, အခြို့သောအသီးအသီးဂရုတစိုက်လက်ရှိဘောလုံးအစေးကျော်အစားထိုးပါလိမ့်မည်ခြောက်လတန်ချိန်အထိအလေးချိန်. ဤ, ဗဟိုဥရောပသစ်တော၏အထင်အမြင်ပေးပါ. ပြီးတာနဲ့အစားထိုး, သစ်တော၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်တဲ့ဘဝအပေါ်ယူပါလိမ့်မယ်, ရာသီလှည့်နှင့်ဆွဲဆောင်အဖြစ်အရောင်များကိုပြောင်းလဲပါ တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်.
ကနေသွားရောက်ကြည့်ရှု Go 10 သည်အထိဖြစ်၏ 10 နေ့စဉ်ညနေ (အခမဲ့ entry ကို)!
သင်လတ်ဆတ်သောမြေကြီးနှင့်စိုစွတ်သောရေညှိအနံ့မှအဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလား? သစ်ပင်များကိုမှတဆင့်နေရောင်ခြည် shimmering များ၏အာရုံကိုခံစားခြင်းနှင့်မြေပေါ်မှာ flickering မှောင်မိုက်အရိပ် ချ. ရန်? ထိုအခါပေါ်သို့ခုန် တစ်ဦးကရထား Save နှင့်ဥရောပထဲမှာအများစုကလှပသောသစ်တောတွေတစုံတယောက်သောသူသည်သင်၏ရထားလက်မှတ်ဘွတ်ကင်လုပ်ရန်, မိနစ်ပိုင်းအတွင်း!
လုပ်ချင်တိုင်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘလော့ဂ်ပို့စ် “ထိပ်တန်း5ဥရောပမှာတော့အများစုကတင့်တယ်သစ်တောများ” သင့်ရဲ့ site ကိုပေါ်ကို? သင်တို့သည်ငါတို့၏ဓါတ်ပုံနှင့်စာသား ယူ. ရုံဤ blog post မှ link တစ်ခုနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ကိုအကြွေးကိုပေးနိုင်ပါသည်ဖြစ်စေ. သို့မဟုတ်ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fmost-beautiful-forests-europe%2F%3Flang%3Dmy- (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)
#သစ်တော #သစ်တောများ #နေပြည်တော် #ခရီးသွား #သဘာဝ အားလပ်ရက်များ